MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE SNORKIE DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Snorkie Dog iyo Sawirro
Gunta yar ee Schnauzer / Yorkie eeyaha ey isku dhafan yihiin
Brandy the Snorkie oo jirta 8 bilood — hooyadeed waxay ahayd Mini Schnauzer aabena wuxuu ahaa Yorkshire Terrier.
Snorkie ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Gunaanad Schnauzer iyo Yorkshire Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Reesie Snorkie 3 bilood, miisaankeedu waa 3 lbs. 'Markii Reesie Cup ay yarayd waxay ahayd mid madow oo madow, sikastaba ha noqotee waxay hada bilawday inay wejigeeda wax yar ku cawdo. Hooyadeed waxay ahayd milix iyo-basbaas yar Schnauzer aabaheedna wuxuu ahaa Yorkie! Dhogorgeedu waa jaakadda jilicsan ee Yorkie, waana halka ay midabkeeda madow iyo tan madow ka timaado, laakiin timaheedu xoogaa way jajaban yihiin waxayna leeyihiin astaamaha Mini Schnauzer. Mawqifkeedu waa Schnauzer, laakiin waxay leedahay dherer yar oo Yorkie ah. '
Tucker eeyga F1b Snorkie ee 8 toddobaad jir ah— Waxaan sawirkan qaaday 2 maalmood kadib markii aan ninkaan guriga keenay. Isagu waa farxad. Aabihiis wuxuu ahaa Snorkie hooyadiisna waxay ahayd Mini Schnauzer. Kani waa kii ugu horreeyay ee aan abid arko oo uu qalbigayga ku dhalaalay isla markiiba!
Teddy Bear the Snorkie markuu jiray 12 toddobaad, culeyskiisuna ahaa 1.12 rodol — hooyadiis waxay ahayd Schnauzer cad aabihiisna wuxuu ahaa Yorkie.
Bailey iyo Brandy Snorkies-kii 8 bilood jir — hooyadood waxay ahayd Mini Schnauzer aabena Yorkie.
Bailey the Snorkie markuu jiray 8 bilood — hooyadiis waxay ahayd Mini Schnauzer aabena Yorkie.
'Waxaan ka helay Sophie iyo Topher oo ka socda Hoyga Xayawaanka aan layn ee Alaqua ee Freeport, FL. Waxaan korsaday Sophie markay ahayd 3 bilood jir ka dibna waxaan korsaday kuwii ugu dambeeyay ee qashinkeeda Alaqua, Topher, markuu ahaa 7 bilood. Aad iyo aad bay u caqli badan yihiin! Iyaga Ha ku cunin cuntada korkooda ilaa aan amarka bixiyo oo si dhakhso leh wax u soo qaado. Qof kasta oo soo noqda isla markiiba wuu ku jeclaadaa iyaga. Waxaan kugula talin lahaa daarad deyr leh maadaama ay leeyihiin Tamar badan! '
Gabadhan yar ee quruxda badan waa isku darka Yorkshire Terrier / Miniature Schnauzer (Snorkie).
Huey the Snorkie (Yorkie / Mini Schnauzer) eey yar oo 6 bilood jir ah— 'Waa eey caqli badan oo tamar badan leh.'
Huey the Snorkie (Yorkie / Mini Schnauzer) eey yar oo jira 6 bilood
Missy the Schnauzer / Yorkie iskudhafka eyda yar ee 4 bilood jirta
Liiska eeyaha Schnauzer Hybrid
shar pei iyo basset hound mix
sawirada eyga weyn ee pyrenees
madow afka cur ey ey
cas sanka pitbull shar pei mix
mini adhijirka australia isku dhafka ah eeyo
Neapolitan mastiff isku darka mastiff ingiriisiga